Thursday March 19, 2020 - 08:54:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
hoos udhac ballaaran ayaa ku yimid dhaqaalaha dowladda Sacuudiga sababa laxiriira isbedellada kusoo kordhay caalamka.
War rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda Aala Sacuud ayaa lagu sheegay in si aad ah hoos loogu dhigay miizaaniyadda dowladda kadib markii uu hoobtay sicirka naftada suuqyada caalamiga ah.
Max'med Aljudcaan oo ah wasiirka maaliyadda Sacuudiga islamarkaana ah wasiirka dhaqaalaha ayaa sheegay in hoos udhigga lagu sameeyay miizaaniyadda dowladda ay sabab utahay cudurka Carona Virus iyo qalqalka ka taagan suuqyada naftada adduunka.
Aljudcaan oo lahadlay wakaaladda wararka Sacuudiga ee loo yaqaan WAS ayaa sheegay in miizaaniyadda xukuumadda laga dhimay adduun lacageed oo dhan 50 bilyan oo Riyaalka maxalliga ah una dhigantay 13.2 Bilyan oo dollar.
hoos udhigiddan lagu sameeyay miizaaniyadda Aala Sacuud ayaa udhigma 5% miizaaniyaddii ay ansixiyeen golaha wasiirada ee sanadda 2020-ka taas oo gaaraysay 1020 Bilyan oo Riyaalka sacuudiga ah una dhiganta 271 Bilyan oo dollar.
Cudurka Carona Virus ayaa sababay in laxiro duulimaadyada diyaaradaha aduunka,safarka maraakiibta ganacsiga caalamka iyo biya xireenada badaha adduunka arrinkaas oo saameyn xun ku reebay dhaqaalaha caalamka.
Tallaabadan uu qaaday Sacuudiga ayaa imaanaysa xilli wasaaradda batroolka wadankaas ay sheegtay in ay sare uqaadayso waxsoo saarka naftada si burbur looga ilaaliyo dhaqaalaha wadanka, Max'med Bin salmaan oo ah dhaxal sugaha Aala Sacuud ayaa isbuucii lasoo dhaafay xirxiray amiirro iyo wasiirro kamid ahaa qoyska talada haya isagoo ku eedaynayay musuq maasuq iyo wax isdabamarin maaliyadeed.